Sannad Baan Is Qabnay - Codka Ubax
Gurigooda ayaan hor mari jirey. Subax kasta marka aan jaamacadda tegayo, halkaas ayay taagnayd. Subax kasta indhahayga ayay duwan jirtay. Waan ka baqayey. Balse saaka, lugihiina way duwatay. Anoo hor taagan ayaan is arkay. Way i soo jiidatay, si dhab ah. Araggeedu waxa uu ii ahaa kabbasho tamar ah. Subaxa aan waayo waan werweri jirey. Sidaas ayaan ugu sheegay. “Marar badan ayaan aniguba ku sigtay in aan kula hadlo, balse aan kari waayey” ayay i tidhi. Maalintaas ayuu badhaadhuhu ii bilaabmay. Webi malab la iiga soo dari jirey, ayaan ogaaday inaan iska leeyahay.
Sannadkii labaad ee jaamacadda ayaan marayey maalintii ay ii la soo kallahday warka iga nixiyey. Hooyadeed ayaa u rabta nin Maraykan jooga. Anigaa u raba naftayda oo qudha. Qorshahan waa in aan ka hor tagnaa. Guur degdeg ah ayaannu ku heshiinnay. Ma haysto wax adduun ah, iyada in aan waayana ma rabo. Aabbeheed ayaan la xidhiidhay, u sheegay ujeeddada, wuu iga aqbalay. Xamda waa la ii meheriyey. Xaaskaygii ayay noqotay, maxaa xumaan kara? Wax badan.
Waan nastay, oon nefisay. Qof baan se nasan. Xamda hooyadeed. Reer imika uun dhismay, si fudud ayaa loo gilgili karaa. Naxariis in aannu galno ayay ahayd, cadaab yar ayaannu kor saaran nahay. In aan inanteeda uga tago ayay rabtaa. Sidii ay rabtay ayaan u yeelay, waan ka tegay, balse inantiina waan la tegay. Meel aan u dhoweyn ayaannu salka dhignay. Sannad ayaannu ka soo maqnayn. Nolol qabow ayaannu galnay. Dukaan ayaan furtay, reer is jecel ayaannu ahayn. Ha kululaato, laakiin Jabuuti way na soo dhoweysay. Raashinka oo qudha maannu kala miisi jirin, jacaylkana waanu kala shuban jirnay. Illaa uu codsi nooga yimid hooyadeed. Waxay sheegtay in ay inanteeda jeceshahay, ayna rabto in ay agteeda ku noolaato. Waxa ay naga codsatay in aannu soo noqonno, ballantuna waxa ay ahayd in ay ilaalin doonto wixii farxaddayadu ku jirto. Waa hooyo, hooyo intaa ku weydiisatay. Waannu ka aqbalnay. Waa go’aan aan illaa maanta qoomameeyo.
Magaaladii ayaannu ku soo noqonnay, shaqo fiican ayaan helay, curadkaygiina uurka ayuu ku jiraa. Intii aanu soo bixin, ayaa aniga meel kale la i geliyey. Xabsiga ayaa la ii taxaabay, sababla’aan. Waxba ma fahansani, balse shirqool ku bilaabmay codsi naxariis leh, ayaa halkaa i dhigay. Xamda ayaa loo sheegay in ninkeedu aanu qof mas’uul ah ahayn. Way ka diidday. In uu dembi galay ayaa lagu celceliyey. Way ka diidday. In budhcadbadeednimo loo xidhay ayaa loo sheegay, way rumaysatay. Waan ogaaday, waan qarracmay. Islaantii ayaa jeelka iigu timid. “Inantayda warqaddeedii keen.” Waan ka diiday. Muddo yar ka dib ayay soo noqotay. Xamda ayaa la socota. “Hooyaday ayaan ku raacsanahay.” Waan arkay in aanan waxba ka beddeli karin. Markii dambe ayaa si cad la iigu sheegay. “Haddii aad xorriyaddaada rabto, warqadda keen.” Kolleyba waa la iga kaxaystay Xamda, in xorriyadda la igaga darsadana ma rabo. Sidaas ayaan ku soo baxay.
Afar bilood ka dib ayay xaqiiqda soo ogaatay, afar bilood ka hor ayaan taas u baahnaa. Cafis bay i weydiisatay, siday uga xun tahay ayay ii sheegtay. Codkeeda ayaa boodhka khafiifka ah ka afuufay qalbi iyada u dhaqdhaqaaqa. Dabcan waan saamaxay, marka horeba u ma cadhoonayn. Meel iyada diiddaniba igu ma taallo. Dib ayaannu sheeko u bilownay. Xaas aan qabi jirey muddo kooban ka hor, ayaannu dib isu barannay. Xidhiidh kii hore ka adag ayaannu yeelannay. Wax kaas laftiisa jebin kara ayaa yimid.
Guur ayaannu ku heshiinnay Xamda, jacaylkaygii. Way ii soo laabanaysaa. Wax walba waannu ka guuleysannay. Maalin iiga suntan maalmaha kale. Waa dhowr bilood uun ka dib markii la i soo daayey. Saaxiibkay ayaa i soo wacay. Bariido ka dib ayuu ii sheegay in uu meher ka soo qadeeyey. Waa meherkii Xamda.
Duhur ayay ahayd, dhulkana nuur baa ku fidsanaa, wax se waan warki waayey. Wax aan ugu jawaabay ma garanayo, waxaan se xasuustaa in uu sii hadlayey markii aan ku jaray. Dhulgariir igu kooban ayaa i haleelay. Mijaha ayaa jidhka sidi kari waayey. Carrabka ayaa laf i noqday. Waa in aan hubsado. Waan wacay. Xamda ayaan wacay. Shalay xaaskayga ayay noqon rabtay mar labaad, maanta nin kale xaaskiisa ayaan wacayaa. Way iga qabatay. “Waxa la sheegayaa, ma dhab baa?” ayaan dirqi ku soo saaray. Waxay ii sheegtay in odhaahdii caanka ahayd loo adeegsaday, iyaduna ay ducada dooratay. Afkeeda markii ay intaas iga tidhi, ayay iigu darnayd. Hawada ayaan ku haftay, xubnaha ayaan qaadi kari waayey, in muddo ahna halkii ayaan keligey sii fadhiyey.
Maalintaas ayaan go’aansaday in aan keli noolaado. Hablo ka dambeeyey ayaa jirey, midna waan danayn waayey. Qalbiga qaybtii wax jeclaanaysay, Xamda ayaa haysata.